यी ५४ वर्षीय धर्मगुरुको लिं'ग नै चट् ! -
यी ५४ वर्षीय धर्मगुरुको लिं’ग नै चट् !
नयाँदिल्ली । गत वर्ष केरलाकी एक महिलाले एक स्वघोषित धर्मगुरुको लिं’ग का’टेर हतारमा प्रहरीसमक्ष आ’त्म’सम’र्पण गरिन् ।
गंगा सवातपडा स्वामी नामले परिचित एक गुरुले ब’ला’त्कार गरेपछि आ’क्रो’शित किशोरीले गुरुको लिं’ग नै चट पारिदिएकी थिइन् ।
५४ वर्षीय स्वामीले विगत पाँच वर्षदेखि ती किशोरीलाई निरन्तर ब’ला’त्का’र गरेका थिए । गुरुको कथित अ’त्या’चा’र सहन नसकेपछि किशोरीले बदला लिएकी थिइन् ।
उनलाई तत्कालै भारतको एक मेडिकल कलेजमा उपचार गरिएको थियो । – एजेन्सी
एजेन्सी । अब हामीले केही नयाँ काम सुरु गछौँ, तब कयौँ स’मस्या आउने गर्दछन्। कुनै व्यक्तिले ती स’मस्याबाट हैरानी भएर कामलाई अधुरै छोडिदिन्छन् भने कुनै व्यक्ति ती समस्यासँग जुधेर लगातार काममा लागिरहन्छन्। तर कुनै बेला यस्तो समय आउछ समस्या घटनुको साटो अझ बढ्दै जान्छ।
यो स’मस्या हाम्रो समयको साथसाथै हाबी हुँदै जान्छ। र हामी कमजोर बन्दै जान्छौँ। स’मस्याले हाम्रीलाई तनावमा पार्नुका साथै तर्क शक्तिमा समेत कमजोर बनाउदै लैजान्छ।
एक अ’नुसन्धानका अनुसार समस्याले हाम्रो प्रवृति अनुसार आफ्नो रंग देखाउने गर्दछ। यदी हामी सकारात्मक छौ भने त्यो सडकको स्पीड ब्रेकर जस्तै हो। अर्थात केही समयमा हाम्रो गति थोरै कम हुन्छ र फेरि दौडिन थाल्दछ।
महान साहित्यकार जार्ज बर्नार्डले भने अव’रोधले हाम्रो सफलतालाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गर्दछ। हामीले जति बाधा, अबरोध पार गर्दै जान्छौँ त्यती बलियो हुँदै जान्छौँ।
यी कुराले हामीलाई सफलतामा अ’वरोध ल्याउछ :